မိုင်တိုင်အမှတ် ၃၃၃ – Pann Satt Lann Books
မြင်အပ်၊ မမြင်အပ် နှစ်ရက်များစွာ သတ္တဝါ .. တဲ့ ။ ၃၁ ဘုံ ဌာနမှာ ကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့ မြင်ရတာက လူ့ဘုံသားတွေနဲ့ တိရစ္ဆာန်ဘုံသားတွေပါ။
ဒါပေမယ့် တစ်ခါတရံမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ အဲ့ဒီဘုံသားတွေ အပြင် လူတို့သေဆုံးပြီးနောက် ရောက်ရှိလေ့ရှိတဲ့ လားရာဂတိ ( ၅ ) မျိုး ထဲကနေ တစ္ဆေသရဲလို့ အများကသိကြခေါ်ကြတဲ့ ပြိတ္တာဘုံသားတွေကိုလည်း ကံအားလျော်စွာ မြင်ရလေ့၊ ကြုံရလေ့ ရှိကြပါတယ်။
အဲ့ဒီလို မြင်ရတဲ့ လူတွေကိုလည်း တစ်ချို့က လိပ်ပြာလှလို့ မြင်ရတယ်။ ကံနိမ့်လို့ မြင်ရတယ်။ စသည်ဖြင့်… စသည်ဖြင့် ပြောလေ့ရှိကြတဲ့အပြင် မြင်ခဲ့ရ..ကြုံခဲ့ရတဲ့ လူတွေနဲ့ အပေါင်းအပါ တစ်ချို့ကလည်း ငါ့ကို သရဲခြောက်လို့၊ သူ့ကို တစ္ဆေခြောက်လို့ ၊ ဒီကောင်ပေါ့ သရဲဝင်ပူးခံရတာ … စသည်ဖြင့် အံ့အားတကြီး ပြောကြ၊ ဆိုကြလေ့ရှိကြပါတယ်။
ဒါက ကျွန်တော်တို့ ဘက်က ကြုံတွေရတဲ့ အမြင်ပါ။ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို ချဉ်းကပ်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ရှုထောင့်မျိုးစုံကနေ ကြည့်ပြီး၊ သုံးသပ်တာ ပိုကောင်းမယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဘက်က မြင်ရတဲ့ အမြင်ပြီးရင် သူတို့ဘက်က မြင်ရတဲ့ရှုထောင့်ကို လည်း အတတ်နိုင်ဆုံးနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးတစ်ချက်လောက် ခံစား လေ့လာကြည့်ရအောင်။
ဟုတ်ပါတယ် …. သူတို့တွေဘက်က အမြင်ကို ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်လည်း …ပူးဝင်၊ ပူးကပ် ၊အသံပေး၊ အနံ့ပေး၊ အရိပ်အယောင်ပြ စသဖြင့် နည်းမျိုးစုံနဲ့ သူတို့ကို လူတွေ မြင်အောင်လုပ်ရခြင်းဟာ အများပြောသလို ခြောက်လှန့်ဖို့၊ စနောက်ဖို့လည်းဖြစ်နိုင်သလို အစာရေစာ ၊အနေအထိုင်တွေ အဆင်မပြေလို့ အသိပေးချင်တာမျိုး ၊လက်ရှိရောက်ရာဘုံဘဝမှာ မနေချင်တော့လို့ အကူအညီတောင်းတာမျိုးလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် သူတို့တောင်းတဲ့ အကူအညီကို မပေးမိရင်ရော ၊ သူတို့တွေ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်နိုင်လဲ ? ပြီးတော့ရော … လူတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲကမှ ကျွန်တော်တို့ကိုမှ ဘာလို့ အသိပေး ၊အကူအညီတောင်းရတာလဲ ? စတဲ့… အချက်တွေကို
စသည့် …ဇာတ်လမ်းများအား ဖတ်ရှုခံစားရင်းဖြင့် သဘောပေါက်သွားမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီဇာတ်လမ်းတွေကို ဖတ်ရှုနေချိန်မှာ ကြောက်ရွံ့ခြင်းဟူသော စိတ်ခံစားမှုရသကို ဖြစ်စေသည့်၊ ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာများကို အသည်းတထိတ်ထိတ် ရင်တဖိုဖိုဖြင့် သိရှိခံစားနိုင်အောင် အနုပညာမာယာရောမွှေဖန်တီး၍ ကြိုးစားအားထုတ်၊ ရေးသားပေးလိုက်ရပါကြောင်း …. ။
5.8 × 0.5 × 8.3 inches
မိုင်တိုင်အမှတ် ၃၃၃ အား ဝေဖန်သုံးသပ်မှု2ရှိပါသည်။
Bhone Myat – October 2, 2021
Jaoy Ku (verified owner) – October 25, 2021
ဖတ်နေရင်းနဲ့ ကျောချမ်းလာလို့ တရွက်နှရွက်ဖတ်လိုက် စာအုပ်ပြန်ပိတ်လိုက်နဲ့ ။ အရမ်းသဘောကျပါတယ်။ အဲ့လို ရသကို လိုချင်လို့ ဒီစာအုပ်လေး မှာဖြစ်တာ။
အက်စ်အိုင်ပီမင်းခေါင်နှင့် စိတ္တဇလူသတ်သမား (20 % Off)